ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပေးမည့် အစားအစာ ၉ မျိုး | Danya Wadi
»ကျန်းမာရေး»ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပေးမည့် အစားအစာ ၉ မျိုး
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပေးမည့် အစားအစာ ၉ မျိုး
Posted by danyawadi on April 20, 2016 in ကျန်းမာရေး
အစားအစာ စားသုံးပြီး အလေးချိန်လျော့ချနိုင်မယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ သံသယမရှိပါနှင့်။ သင်အသုံးပြုသော ကယ်လိုရီထက် စားသုံးသော ကယ်လိုရီက လျော့နည်းနေရင် သင် ၀ိတ်ကျလာမှာ အမှန်ပါ။
အချို့အစားအစာတွေက သင့်ကို ၀ိတ်ကျစေမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစာခံစေပြီး စားချင်စိတ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အချို့ကတော့ သင့်ရဲ့ Metabolism ကိုတောင် မြင့်တက်လာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင် စူပါမားကတ် သွားမယ်ဆိုရင် အောက်ပါစာရင်းလေးကို ယူသွားပါ။
ဈေးသက်သာတယ်။ ဗိုက်ဝစေတယ်။ အမျိုးမျိုးပြု လုပ် စားသုံးလို့ရတယ်။ ပရိုတင်းဓါတ် ဖြည့်စီးပေးတယ်။ ပဲတွေမှာ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါပြီး ချေဖျက်ရာမှာ အချိန်ယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြာရှည်စွာ ဗိုက်ဝစေပြီး ခဏခဏဗိုက်ဆာခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အစာမစားမီမှာ ဟင်းရည်တစ်မျိုးမျိုးသောက်ပါ။ အစာစားတဲ့ ပမာဏလျော့နည်းလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဟင်းရည်ကြည် အမျိုးအစားကိုပဲ ချက်ပြုတ်ဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
အစာစားပြီး ချောကလက်လေး စားချင်ပါသလား။ အမည်းရောင်ချောကလက်ကို ရွေးခြယ်ပါ။ လေ့လာမှုများအရ အမည်းရောက်ချောကလက်စား ထားတဲ့လူတစ်ယောက်က နောက်ထပ်အစာတစ်နပ် စားချိန်မှာ အစား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့စားတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
မပါမဖြစ်ကတော့ အသီးအနှံများပေါ့။ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာတယ်။ ကယ်လိုရီလည်း နည်းတယ်။ ဗိုက်လည်း ၀စေပါတယ်။
၅. ကြည်ဥနှင့် ကြက်အူချောင်းများ
အသားဓါတ်များ သော နံနက်စာက သင့်ကို တစ်နေ့တာ လုံး မုန့်ပဲသွားရေစာ စားသုံးခြင်းကို လျော့ချပေးပါ လိမ့်မယ်။ နံနက်စာကို အသားဓါတ် များများနှင့် ၃၅၀ ကယ်လိုရီလောက်စားထားပါက ညနေစောင်းတဲ့အထိ အစာခံတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အခွံမာသီးများ စားထားတဲ့လူတစ်ယောက်က အစာစား တဲ့ပမာဏလျော့ကျသွားတာကို လေ့လာမှု များအရ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ပန်းသီးဖျော်ရည်နှင့် ပန်းသီးဆော့များကို မဆိုလိုပါ။ ပန်းသီးကို အလုံးလိုက်ကိုက်စားခြင်းက အစာစားချင် စိတ်ကို ထိန်းပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သစ်သီးများကို ဒီတိုင်းစားသုံးခြင်းက အမျှင်ဓါတ်ကို ပိုရစေပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀ါးစားနေရခြင်းက သင့်ဦးနှောက်ကို အစား စားသုံးနေခြင်းအဖြစ် အချက်အလက်ပို့ဆောင် ပေးခြင်းဖြင့် ဗိုက်ဆာခြင်းကို ပြေပျောက်စေပါတယ်။
လူအယောက် တစ်သိန်းကျော်ကို ၁၀ နှစ်ကျော်လေ့လာ မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် တွေ့ရှိချက်များအရ အစား အစာများ အားလုံးထဲတွင် ဒိန်ချဉ်သည် ကိုယ်အလေးချိန် ကို သိသာစွာ လျော့ချပေးနိုင်သော အစားအစာဖြစ်သည်။
၉ . ဂရိတ်ဖုသီး
ဂရိတ်ဖုကလည်း သင့်ကို ၀တ်ကျစေမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်တဲ့ လူတွေအတွက် ပိုသိသာပါတယ်။ San Diego မှ Scripps Clinic ၏ လေ့လာချက်များအရ အ၀လွန်သောလူများသည် အစာမစားမီ ဂရိတ်ဖုသီး တစ်ခြမ်းစားထားပါက ၁၂ ပတ်လောက်ကြာသောအခါ ၃ ပေါင်ခွဲခန့် အလေးချိန် လျော့ကျသွားတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ဂရိတ်ဖု ဖျော်ရည်သောက်ခြင်းကလည်း တူညီတဲ့ ရလာဒ်ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဂရိတ်ဖုသီးက အဆီကို လောင်ကျွမ်းစေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့ချပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂရိတ်ဖုကို စားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်သောက်နေကျဆေးတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တုိုင်ပင် ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆေးအညွန်း မှာသေချာဖတ်ပါ။
သင့်ဈေးဝယ်ခြင်း ထဲမှာ အဆီမပါသောအသားများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ အနှံပင်များ ပါဝင်ပါစေ။
← စစ်တွေ သဲချောင်း ဆိပ်ကမ်း အနီးမှာ ဒုက္ခသည် စက်လှေ တိမ်းမှောက်
A Rohingya ferry boat sank in Pauktaw Myanmar, ​ပေါက်​​တော ဆင်​တက်​​မော်​၌ သေ​င်္ဘာေ​ရမြှုပ်​မှု သတင်း →
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံသို့ တက်ရောက်​မည်​ မဟုတ်​
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (531) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (3) ဗဟုသုကဏ္ဍ (14) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,355) သတင်းများ (11,897) သမိုင်း (424) သုတစာပေကဏ္ဍ (60) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (359) အင်တာဗျူး(258) အစ္စလာမ်ဘာသာ (339) အထူးကဏ္ဍ (2,080) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (161) အထွေထွေ (38) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (6) ဥပဒေ (206) ဆောင်းပါးများ (4,525) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (9) English Dictionary (3) Other Dictionary (1) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (8) English – Rohingya (3) English Version (1,524) Articles (741) Documents (94) History (260) Arakan History (193) Burmese History (57) M-M History (46) Scripts (5) World History (42) Interview (19) Laws (12) News (932) Breaking News (281) Local News (291) Open Letter (11) Other News (10) World News (524) Religious (36) Islamic (35) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (217) Introduction (5) Link (248) Movie (78) Other Dictionary (6) Photos (752) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (340) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month April 2018 (53) March 2018 (78) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)